Fomba natoraly mampangirana hoho
Paipaika 5 dia tsara fianjaika
Manan-danja be ao anatin’ny fiaraha-monina ny endrika ivelany. Indray mitopy maso eny aminao monja dia fantatra raha misy « style » ianao na tsia. Ahoana ny atao mba hanana ilay fihavahana amin’ny hafa kanefa
Otra atao isan’andro, tsy mampisy kentrona
« trousse de maquillage » : inona avy ny tokony ho hita ao ?
Ny vehivavy rehetra, dia tokony hanana fitaovana fikojakojana endrika manaraka azy isan’andro. Ny ankamaroan’ireo jejojejo angamba, dia efa samy mba mitondra fitaratra kely sy lokomena, na « gloss »
Manankarena singana vitamina A ny karaoty. Mandrisika ny vatana hamokatra kokoa ny singana « collagène » izy, izay mahatonga ny hoditra halandina sy hanana fizozoranatsara. Toy izao ary ny atao, raha te hiady amin’ny kentrona sy hanatanora endrika amin’ny alalan’ny karaoty :
· Kikiso amin’ny rapy aloha ny karaoty dia volavolao hahazo karazana paty malemy
· Ahosory amin’ireo faritra mikentrona iny paty iny dia araho otra.
· Avelao hiasa mandritra ny 30 minitra dia kobano amin’ny rano matimaty avy eo.
· Avereno isan’andro.
Ny akondro koa dia vory vitamina maro karazana. Tsy vitan’izay fa manana ireo singa mpanala poizina ao anaty hoditra izy. Toy izao no atao :
· Poreto amin’ny « mixeur » ny akondro roa vao novoasana mba hahazo paty marihitra tsara
· Iny paty iny no ahosotra amin’ny faritra mikentrona
· Avela hilona 30 minitra vao kobanina amin’ny rano matimaty
· Hosory “crème hydratante” avy eo.
· Averina indroa isa-kerinandro.
Ny asidra ao anaty voasarimakirana dia manadio haingana ny tarehy sady manala ireo sela maty. Sady manadio izy izany, no manome fahasalamana ihany koa. Izao no fanaovana azy :
· Alaina ranony ny voasarimakirana miisa roa
· Iny no ahosotra amin’ny tarehy misy kentrona
· Avela hilona 5 hatramin’ny 10 minitra, ary tsy mivoaka ho azon’ny masoandro mihitsy, mandritra izany
· Kobanina amin’ny rano mangatsiaka.
· Azo averina in-2 na in-3 isan’andro raha ara-dalàna sy tsy makiana na sarotiny ny hodi-tava.